आज भदौ २९ गते मंगलबार, कस्तो होला हजुरको भाग्यफल? हेर्नु-होस् दैनिक राशिफल !
मानसिक रूपले अस्वस्थ रहनुहुनेछ। आमा र स्त्रीवर्ग सम्बन्धि चिन्ताले सताउनेछ। यात्रा गर्न समय अनकुल रहेको छैन । समयमा नै भोजन र निन्द्रा प्राप्त हुनाले शरीरमा अस्वस्थता अनुभव हुनेछ। कुटुम्बको बारेमा सावधानीपूर्वक काम लिनु नै लाभदायक हुनेछ ।
कार्यसफलता, आर्थिक लाभ र भाग्यवृद्धिको योग रहेको छ। भाई-बहिनीसँग कुटुम्बिक चर्चा र आयोजन हुनेछ। तन-मनबाट उर्जा र आनन्द अनुभव गर्नुहुनेछ। मित्र तथा आफ़न्तको घरमा आगमन हुनाले आनन्द महसुस हर्नुहुनेछ।
परिवारसँग हुन सक्ने गलत धारणाबाट बच्नुहोला। अनावश्यक खर्च नगर्नुहोला। मानसिक तनाव र द्विधाको कारण महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्नु हुनेछैन। कार्यमा निर्धारित सफलता प्राप्त हुनेछैन। शुभ कार्यमा जाने अवसर मिल्नेछ। वैवाहिक जीवनमा आनन्द लिनुहुनेछ।
ईश्वर भक्ति र पूजा-पाठबाट दिनको प्रारम्भ गर्नुहुनेछ। परिवारमा मंगलकारी वातावरण रहनेछ। साथी र आफन्तको तर्फबाट उपहार मिल्नेछ। कार्य सरलतामा नै पूर्ण हुनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
समाजमा उच्च स्थान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक कार्यमा भाग लिन जानुहुनेछ। वृद्द र मित्रको सहयोग मिल्नेछ। रोजगार र व्यवसाय क्षेत्रमा आय वृद्धि हुने योग छ। सन्तान र श्रीमतीको तर्फबाट लाभ हुनेछ। घरमा मांगलिक कार्यको आयोजन हुनेछ।
कुनै कार्य वा आयोजनामा सरकारको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ। अफिसमा महत्त्वपूर्ण मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च पदाधिकारीसँग विचार-विमर्श हुनेछ। अफिसको कामकाजको दृष्टिले भ्रमणमा जानुहुनेछ। कार्यभार बढ्नेछ।
विदेश प्रस्थानको लागि सुनौलो अवसर आउनेछ। विदेश बस्ने आफन्त वा मित्रको समाचार मिल्नेछ। व्यापारीको व्यापारमा धन लाभ हुनेछ। नयाँ आयोजना हातमा लिन सक्नुहुनेछ। लामो दूरीको यात्रा हुनेछ। आध्यात्मिकतामा प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तानको प्रगति हुनेछ। स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला।
संवेदनशीलता र प्रेमको भावनाले हरा-भरा मन विपरीत लिंगी वर्ग तर्फ अधिक आकर्षित हुनेछ। मोज-शोकको वस्तु वा नयाँ कपडा खरिद गर्नुहुनेछ। उत्तम दाम्पत्यजीवन मिल्नेछ। व्यापारीले विदेशबाट व्यापारमा लाभ प्राप्त गर्नेछन्। सहकर्मी लाभदायक साबित हुनेछ।
उदासीन वृत्ति र शंकाको भावनाले मन बिचलित बनाउनेछ। दैनिक कार्य पुरा हुन ढिलाई हुनेछ। परिश्रम गरेअनुसार फल कम मिल्नेछ। पेसमा सम्हालेर रहनुहोला। माईती पक्षबाट चिन्ताजनक समाचार आउनेछ। उच्च पदाधिकारीसँग झगडा हुन सक्ला।
दिन चिन्ता र उद्वेगबाट परिपूर्ण हुनेछ। पेटको गडबडी स्वास्थ्य खराब हुनेछ। विधार्थीको पढाईमा अवरोध आउनेछ। अचानक पैसा खर्च हुनेछ। बौद्धिक चर्चा र सम्झौतामा असफलता मिल्नेछ।
२०७८ भाद्र २९, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 284 Views